Malunga Nathi |Huai'an Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
umboneleli oqeqeshiweyo wophuhliso lwemveliso yonyango egubungela iintlobo ezininzi zemveliso kwifayile yonyango.
I-Huaian Zhongxing ibekwe kwi-33-8 Shanyang Avenue, uMmandla woPhuhliso lwezoQoqosho lwaseHuaian, kwiPhondo laseJiangsu, kunye nempahla esisigxina engaphezu kwe-50 yezigidi ze-yuan.Inkampani yethu igubungela ummandla oziimitha ze-suqares ezingama-52000, kunye neemitha ze-suqare ezingama-4000 zocweyo olucocekileyo lweendawo ezixhasayo.
Imveliso yethu ehamba phambili eLahlayo iMedcial Face Mask , iCotton Swabs , iCompress yeGauze yezoNyango , iMedical Cap eLahlwayo , iMedcial Cotton Ball , iPhepha leBhedi yezoNyango .
Singabathengisi bezixhobo zonyango kumazwe angaphandle kunye namakhulu amashishini asekhaya .Imveliso yethu ithengiswa kwihlabathi liphela , isasazeke kwi-Notth Americal , eYurophu , eAsia nase Afrcia nakwiimarike zasekhaya ngokubanzi .Kwaye ikhula ngokukhawuleza ngokunjalo .
I-ZhongXing yethu bonke abasebenzi baya kuzama konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeemveliso ezingcono kunye nenkonzo kwimpendulo kubathengi bethu kunye nabahlobo bethu.Sigxininisa kumgaqo-nkqubo wokusinda komgangatho, uphuhliso lomgangatho wetekhnoloji.Umgangatho ogqwesileyo usiyalele ukuba sifumane isabelo-malike esithe chatha. abathengi bamkele ekhaya nakwamanye amazwe ukuba consulate kunye cooperate.We siqinisekile ukubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo kuye wonke umthengi ngokunyanisekileyo.
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yophuhliso, iqela leZHONGXING ligxile ekuveliseni nasekuthumeleni kumazwe angaphandle uthotho lweemveliso zeCotton Ball.
Umbono:thembela kumoya weqela le-ZTE, yenza inkokeli yokuthengisa izixhobo zonyango.
Amaxabiso:imfezeko kunye nembeko, ithemba kunye nobuhle, ubunye kunye nepragmatism, umgangatho ophezulu kunye nokusebenza kakuhle.
Umoya:izinto ezintle, ezizinikezeleyo, ezizithembayo kunye nokunyaniseka, ukusungulwa kwentliziyo.
Injongo:ukunyaniseka nokusebenza kakuhle, inkonzo kuqala.Umanyano kunye noshishino, umgangatho kuqala.
Mask Njengobuso, 3 Gcoba iMaski yoBuso eLahliweyo, Umsebenzi Wemaski, Ukulahlwa kweHalf Mask Respirator, Ffp1 Imaski elahlayo, Iimaski ezi-3 eziLahlwayo ngeFda,